Izinhlobo ezinkulu izakhiwo senhlangano ye ukuphathwa: ngokuqinile
Kumiswa izimiso emakethe umnotho kuphi futhi ungalokothi sihamba ngaphandle kokungenela umbuso kumiswa izikhungo, ebheka izinhlobo eziyisisekelo izakhiwo senhlangano ye ukuphathwa. Ngaphezu degree of ukuxhumana phakathi kwezikhungo amazwe futhi ekhona imvelo zezikhungo, isici esibalulekile ekuphumeleleni kwalo ukwethulwa izikhungo iba Umklamo izakhiwo yenhlangano ukuphathwa isimo.
Nokho, isimo, enifeza inqubomgomo yokulawulwa, ukuthuthukisa eziyisisekelo izinhlobo izakhiwo yenhlangano zokuphatha, kakhulu ezihilelekile amafomu iyasilela yesikhungo elihlobene ne bezindawo, imisebenzi yebhizinisi ziphoqa aggregate, eboleka ngaphansi isiqinisekiso zikahulumeni, futhi ngokuphambene nalokho, indima uhulumeni kakhulu entula e izinqubo kumiswa ukudalwa isikhala kwezomnotho, ukuqinisekisa amabhizinisi ezigcina umthetho, izinkampani, monopolies zemvelo, e Avikelayo labo amalungelo umnikazi, lo mshini kumiswa mncintiswano.
Esinye isiqondiso ushintsho yesikhungo zisabela kanjani ejenti kwezomnotho njengoba kulokho izinhlobo izakhiwo senhlangano ye ukuphathwa phambili yezinguquko yangaphandle yebhizinisi imvelo, futhi abangele ukulungiswa kwezindawo zezemfundo esikhundleni ezinye izingxenye. Izinhlobo New izakhiwo senhlangano ye ukuphathwa noshintsho zezikhungo olwenzeka ejenti ledzinga yokusabela kuya umkhiqizo othize - izikhungo. Izinzuzo zinguquko ikhono ukunciphisa izindleko kuthengiselana esimweni esikhungweni yekuchumanisa (bangasephula yangasese, imali ezinzile, amanani entengo khulula, ukuntuleka imingcele ukunyakaza capital, njll) noma ukuthola iqashwe enikeziwe ukuthi ukusatshalaliswa izikhungo (umkhawulo wokuncintisana, ukubeka uvo emakethe ezivimba, ukwethulwa yokungenisa amanani, amaningi exchange rate, njll).
Mshini nokuxhumana phakathi nezikhungo kanye namafemu waqaphela ngokusebenzisa zonke izinhlobo yenhlangano izakhiwo ukulawula kanye nezinguquko yesikhungo emele inqubo eyinkimbinkimbi ekuthuthukiseni uhlelo yesikhungo obnovleniepervonachalnoy imodeli zezikhungo, ekuguquleni izikhungo ezintsha. Phakathi nalokho kubingelelana, siyaphela kancane kancane izikhungo ingaphumeleli, okuyinto esikhundleni emisha. Kule nqubo kukhona institutionalization ngokuqinile. Abanye osomnotho ichaza institutionalization ngokuthi "inqubo ukwakheka kanye nokuhlanganiswa isethi ngaphambilini yamazinga loluhlelekile nalolungakahleleki lomsebenzi nama-ejenti ezimakethe (izikhungo) nokukhiqizwa yabo eqhubekayo kule nkampani."
Inhloso institutionalization lenkampani esikhathini soshintsho kwezomnotho ukuqinisekisa nokusimama yomsebenzi yenkampani ngokunciphisa ukungaqiniseki ingozi ukuthi ichaza indima izikhungo e ngokuqinile. Izici lenkampani ekubeni kungenzeka ukuhlukanisa izigaba ezintathu: "deinstitutionalization" - "ukuzivumelanisa" - "ukuvuthwa". Futhi imisebenzi emikhulu ehlobene umthelela enkampani kumiswa izakhi imvelo zezikhungo, kufanele kubhekwe: kumiswa uhlaka lomthetho futhi zokulawula, wasinikeza a uhlamvu oluphelele futhi senziwe njalo. Ngakho, yokuvumelana izingqinamba eyenziwe imvelo, inkampani lishintsha lemithetho. Nesisekelo ngokuqinile ngesikhathi zesikhashana umnotho emakethe ngamakhasimende kuholela esiphethweni sokuthi institutionalization itholakala kumiswa naphakathi-izikhungo kanye umthelela inkampani kwi ukwakheka izikhungo angaphandle. Inqubo institutionalization ngokuqinile kwandisa nekusebenta inkampani kanye nokuncintisana yayo ukuthi ekugcineni kuholela ukuthuthukiswa komnotho okusimeme.
Ukuphathwa kwezimali ibhizinisi - isihluthulelo sempumelelo
Izinqumo Development nokuphathwa - isici esibalulekile ukuphathwa
Akimov Andrey Igorevich - umphathi phezulu "Gazprombank"
Indlela ukwandisa nekusebenta ukuphathwa kule nkampani
Ukuphelela - Iyini? Izici namasimu kwesicelo
Iziza Iningi ukuheha abathengi: ohlwini, umBhalo nokukhulunyelwa kwawo
Ukwabiwa amasonto 30 okukhulelwa - yini okumele ngiyenze? Isonto 30 - Kwenzekani?
Udweba kanjani e Paint Ithuluzi Sai? incazelo yohlelo yokusetshenziswa
Kungani Sberbank enganikanga imali nge-ATM? ATM enganikanga imali, yini okufanele uyenze?
Imincintiswano Fun for the wedding i isethulo ezithakazelisayo
Kuyini giardia, yeka ukuthi kuyingozi kanjani they are kanye nendlela yokuzigwema ukuze zingasivimbi
Breed dogs Ihluzo Irish: incazelo ubunjalo kanye nentengo umdlwane
Indlela ukuhlanza burn- yensimbi: amathiphu namasu
"Minto Pyramid Isimiso": imithetho 12 segolide. Indlela kanye nokubuyekeza
Kanjani ukuyeka lwemithambo ukopha ekhaya?
Recipe: eyosiwe imifino. ongakhetha ezimbili ukupheka
Grand Prince of Kiev ne Chernigovskiy Igor Olgovich